Imifanekiso yamaphephadonga e-Android | I-Androidsis
Ezona zixeko zinomtsalane, iilwandle zamaphupha amahle okanye ezona ndawo zinomtsalane zintaba zikulindile kweli candelo lamaphephadonga e-landscape kwifowuni yakho ye-Android. Ukuma komhlaba okumangalisayo ophuphe ukukwazi ukudibana nomntu, onokutshintsha ukubonakala kwefowuni yakho ye-Android ngendlela elula kakhulu.
Fumanisa zonke ezi milo zonke iintlobo ozifumanayo kule galari. Ngokuqinisekileyo kukho imvelaphi ehambelana ngokugqibeleleyo nefowuni yakho ye-Android. Ukuba ubukhangela amaphephadonga aneenkangeleko zomhlaba, awunakuphosa nayiphi na imvelaphi kweli candelo.
Musa ukulinda ixesha elide kwaye ukhuphele Funos de pantalla de imihlaba eyona inomdla kwi-Android yakho. Ibhitshi, isixeko okanye intaba, ukhetho lwethu lwephepha lodonga liza kukusa kwiindawo ezintle, ukuze uzonwabele ngalo lonke ixesha uvula isikrini se-smartphone okanye ithebhulethi yakho.
Ukuba ufuna ngaphezulu iimaphephadonga zasimahla zethebhulethi okanye iselfowuni, kwikhonkco esikubeke nje uya kubafumana.